DAAWO:- DAMUL-JADIID oo diyaarisay Madaxweynaha Hiiraan iyo Sh/Dhexe iyo Qorshe halis ku ah Xasan Sheekh oo Beesha Xawaadle ay bilowday | Barbaariyaha bulshada
DAAWO:- DAMUL-JADIID oo diyaarisay Madaxweynaha Hiiraan iyo Sh/Dhexe iyo Qorshe halis ku ah Xasan Sheekh oo Beesha Xawaadle ay bilowday
Warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in Wasiirka Amniga ee Xukuumadda Soomaaliya uu yahay ninka Madaxtooyada u diyaarineyso inuu ku soo baxdo xilka Madaxweynaha Maamulka Hiiraan iyo Sh/Dhexe, kaasoo dhismihiisa uu ka socdo magaalada Jowhar.
Ilo wareedyo ayaa u xaqiijiyay Warbaahinta in Madaxtooyada ay ku qal-qaalineyso in C/risaaq Cumar Maxamed inuu isku sharaxo xilka Madaxweynaha Maamulka labada Gobol ee Hiiraan iyo Sh/Dhexe.
Wararka ayaa intaa ku daraya in laga yaabo in maalmaha soo socda uu is casilo, si uu ugu dhawaaqo Musharaxnimada xilka Madaxweynaha.
Wararka ayaa sheegaya in booqashadii Madaxweynaha uu dhowaan ku tagay Jowhar ujeedkeedu ahaa sidii loo dar dar gelin lahaa dhismaha maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, ka hor doorashada bisha October.
HALAKAAN KA DAAWO MUUQAALKA
Dhanka kale magaalada Baladweyne ayaa waxaa ka socda lolo Balaaran oo looga soo horjeedo Qorshaha Xasan Sheekh Maxamuud, qorshahaas oo ay ku biireen siyaasiyiin badan oo qaarkood ay musharaxiin ay yihiin.
Sidoo kale waxaa haatan qilaaf uu soo kale dhex galay qaar ka mid ah lafaha beesha Xawaadle, iyadoo arintaas la aaminsanyahay inay ka shaqaysay madaxtooyada Soomaaliya.